Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo maxkamdda ka soo muuqday. – Hornafrik Media Network
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo maxkamdda ka soo muuqday.
By HornAfrik	 On Sep 29, 2018
HorbAfrik-Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa Marka ay Taariikhdu aheyd 27/09/2018 u fariisatay dacwad ciqaabeed loo haysto eedeysanayaasha kala ah Daahir Maxamed Nuur oo ah Agaasimaha waaxda dib u dejinta Barakacayaasha ee Wasaaradda Gargaarka & Maareynta Musiibooyinka XFS iyo Maxamed Cumar Macallim oo ahaa Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Gargaarka oo ahaa maqane.
Waxaa Maxkamadda furay Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Garyaqaan Muuse Macallim Maxamed, iyadoo ay ka soo qeyb galeen xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr.Axmad Cali Daahir iyo ku xigeenadiisa, Qareenada difaacayay eedaysane Daahir Maxamed Nuur, waxayna Maxkamddu intaa kadib guda gashay Dhagaysiga Dacwadda loo heysta eedaysanayaasha.
Dad xabsi loo dhigay kiis la xiriira Qalbi dhagax.
Xog- Siyaasiyiin mucaarad ah oo isku baheysanaya Muqdisho.